कांगेसमा एक ढिक्का हुँदै कोइराला परिवार, नेताहरुले भने ‘हामी हिजो र आज पनि संगै छौं’ - Purbeli News
प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर ०२, २०७५ समय: १८:०३:३०
कार्यक्रममा एउटै माला भित्र रहेका कांग्रेस महामन्त्री डा. सशांक कोइराला, केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला र नेत्रृ सुजता कोइराला
माेरङ / “हामी हिजोपनि एक थियौं, आज पनि छौं भोलीपनि रहनेछौं यसमा कुनै भ्रम नरहोस्,” नेपाली कांग्रेसका नेताहरु डा. सशांक, शेखर र सुजता कोइरालाले बताइरहँदा कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण नेता कार्यकर्तामा उत्साह थपिएको थियो । आइतबार विराटनगरमा जीपी कोइराला फउण्डेसन प्रदेश नम्बर एक कार्यालयको तिनै जनाले संयुक्त उद्घाटनका क्रममा उनीहरुले कोइरालापरिवार भित्र कतै कसैप्रति तिक्तता नरहेको पनि स्पट पारे । उनीहरुले भने, ‘ हामी तिनै जनालाई एकस्थानमा ल्याउनका लागि गरिएको यो कार्य प्रशंसनीय रहेको छ ।’
कांग्रेस कमजोर हुदां लोकतन्त्र कमजोर हुने बताएका डा शेखर कोइरालाले भने, “पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर अघि लगाउने जिम्मा हामी तपाइहरुको हो, त्यसमा हामी तीन जना कोइरालाले पुरा गर्छौ भन्नेमा ढुक्क हुनुस्। मात्र तपाईहरुले हामीलाई साथ दिनुस्।” “वीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, जस्ता दिग्गज नेताहरुले देखेको सपना पुरा गर्नका लागि हामी तीनैजना कोइरालाहरु एकस्थानमा उभिएको छौ,” उनले प्रस्टाए ।
वर्तमान सरकार राजनीतिक तरलता र अस्थिरतामा रुमलिएको बताएका नेता कोइरालाले नीतिगत भ्रष्ट्राचारले सरकारलाई दलदलमा फसाएको अरोप लगाए। पछिल्लोसमय बुढी गण्डकी, नेपाल एयरलाईन्सको वाइडबडी विमान तथा विभिन्न पदाधिकारी नियुक्त त्यसको ज्वलन्त उदाहरण भएको उनको भनाइ थियो। “नौ महिने सरकारले न्यापालिका ध्वस्त बनायो, सञ्चारक्षेत्र कुण्ठित बनाउदैछ, वित्तिय क्षेत्र ध्वस्त बनाउदैछ, र अब यसको गिद्धे नजर नेपाली सेनामा छ,” उनले सरकारको आलोचना गर्दै भने।
कार्यक्रम आयोजक फाउण्डेसनकी प्रदेश नम्बर एक संयोजक इन्दिरा थापाले तीन जना कोइरालालाई एउटै माला भिराइदिरहदा डां सशांक कोइरालाले कोइराला परिवारमा कुनै असमझदारी नरहेको स्पस्ट पारे । पार्टी सभापतिको आकांक्षीका विषयमा उनले विगत वीपी कोइरालाले परशुनारायण चौधरीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दै अघि सारेको अभिब्यक्तिलाई उदाहरण स्वरुप प्रस्तुत गरे। कोइराला परिवारबाट सभापतिको दाबीका विषयमा महामन्त्री कोइरालाले भने, “कोइरालाहरुको रगतमा छ राजनीति अनि नेतृत्व जसका लागि म नै या शेखर दा या उनीनै सभापति हुनुपर्छ भन्ने छैन। हामीबीच प्रतिस्पर्धा छैन।”
तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको २०४८ सालदेखि ५२ सालसम्म कार्यकाल नेपालको स्वर्णकाल भएको बताएका महामन्त्री कोइरालाले सोही समय नेपालको विकास धेरै भएको दावी गरे ।
कांग्रेसले ४० वर्षमूनिका युवालाई पार्टी भित्र आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोडदिएका महामन्त्री कोइरालाले सीमान्तकृत, महिलालाई दिएको आरक्षण दिएजस्तै युवाहरुलाई पनि आरक्षणको ब्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए। अहिलेको सरकारले कुनै ठूलो कार्य गर्न नसकेको आरोप लगाउदै उनले सरकारमा परिवर्तनको कुनै संभावना नै छैन ।
कार्यक्रममा नेतृ सुजाता कोइरालाले पनि कोइरालापरिवारबीच कुनै तिक्तता नभएको स्पट पारेकी थिइन्। त्यसैगरि, मोरङको राजनीतिमा फुट रहेको बताएका केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्यालले आफूहरुबीच एकताको आवश्यक्ता जरुरी रहेको औल्याएका थिए। त्यसैगरि, विगत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टी त्यागेर तत्कालिन माओवादीमा प्रवेश गरेका बाबुराजा ओझा पूनः पार्टीमा प्रवेश गरेकाछन ्। यसैगरि, उद्घाटन गरिएको संग्राहलयमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विभिन्न समयका तस्वीर राखिएको छ ।